VaMugabe naVaTsvangirai Voyedza Kugadzirisa Zviri Kunetsa muHurumende yeMubatanidzwa
Kunetsana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muhurumende yemubatanidzwa kunyange hazvo neChitatu vatungamiri vatatu vari muhurumende yemubatanidzwa vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vakaita musangano kuZimbabwe House wekuyedza kupedza mabopoto ari muhurumende.
Makurukota matatu anoti gurukota rezvemari, VaTendai Biti, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, uye gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, vakadaidzwa kumusangano uyu.
VaBiti vaitaura nezvenyaya yemihoro yevashandi vehurumende vachiti havana kwavanokwanisa kuwana mari iri kudiwa kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari. Asi VaMugabe vakati VaBiti vashandise mari yakabva kusangano re International monetary Fund yekubatsira nyika yespecial drawing rights. Zimbabwe yakapihwa mari inosvika US$527m uye kwasara mari inosvika US$165m.
Asi VaBiti vakati mari iyi hakuna kwainosvika kana paine vashandi vari kubhadharwa nehurumende vachifanira kunge vasiri pabasa kana kuti ma ghost workers. Zvakatenderanwa kuti nyaya iyi idzokere kudare remakurukota rose sezvo VaBiti vakadzokorora kuti havana mari yavari kuwana kubva mangoda.
VaChinamasa vakataura pamusoro pepasvika nhaurirano vakati nyaya dzakaita sedzekuvandudza kwezvekudzivirirwa kwemukati menyika kana kuti security sector reform, dzigadziriswe nevatatu ava.
VaShamu vanonzi vakanzi vawandudze mabhodhi eBroadcasting Authority of Zimbabwe, Zimbabwe Broadcasting Corporation pamwe neMass Media Trust.
Asi bepanhau reHerald rinoti izvi hazvina kuwiriranwa. Mutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vanoti Herald riri kureva nhema.
Mukuru weMedia Centre, VaEarnest Mudzengi, vanoti hurumende iri kutamba nepfungwa dzevashandi.